Turkiga oo cambaareeyay weeraradii Argagixiso ee shalay | KEYDMEDIA ONLINE
Turkiga oo cambaareeyay weeraradii Argagixiso ee shalay
Dowladda Turkiga ayaa si adag u cambaareysay weerarradii Kooxda Al-Shabaab ka getsteen Soomaaliya shalay oo Sabti ahayd.
ISTANBUL, Turkey – Dalka Turkiga ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin weerarada Argagixiso ee ka dhacay Soomaaliya Sabtidii, kuwaas oo lala eegtay labo xero oo ciidanka Xoogga dalka ku leeyihiin Shabeellaha Hoose iyo Maqaaxi lagu shaaxo oo ku taalla Muqdisho.
"Waxaan ka xunnahay inaan helno warka sheegaya in askar badan iyo shacab ay naftooda ku waayeen Soomaaliya, weeraradii argagixiso ee lala beegsaday ciidamada Qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka aan waxba galabsan," ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga.
"Waxaan si adag u cambaareyneynaa weeraradan foosha xun ee argagaxiso waxaanan uga tacsiyeynaynaa Dowladda aan walaalaha nahay iyo shacabka Soomaaliyeed," ayaa lagu yiri bayaanka.
"Waxaan u rajeynaynaa naxariista Allah kuwa ku naf waayey weerarada iyo soo kabasho deg deg ah kuwa ay gaaraan dhaawacyada," ayaa sidoo kale lagu yiri tacsida Turkiga.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay inay ku dishay in ka badan 47 askari oo ka tirsan ciidamada Dowladda weerarkii ay ku qaadeen xerada ciidamada ee Bariire ayna ku qabsadeen dhowr baabuur oo kuwa dagaalka ah.
Halka ugu yaraan 6 dhalinyaro ah ay ku geeriyoodeen qarax is miidaamin ah oo lal beegsaday maqaaxi ka taalla degmada Shangaani ee Gobolka Banaadir.
Saraakiisha Dowladda Soomaaliya ayaa dhankooda guulo ka sheegatay dagaallada Shabeelaha hoose, waxaana la soo bandhigay meydka askar ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhawaad 80 gaaraya.
“Turkiga wuxuu sii wadi doonaa go’aanka uu ku garab istaagayo Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jiraan argagixisada,” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga.
Midowga Yurub ayaa ku baaqay in si deg deg ah loogu laabto wada hadalada ku saabsan qabsoomida doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin laguna saleynayo heshiiskii September 17 2020, lagu gaaray Caasimadda dalka.
Xubno ka tirsan Congress-ka oo ku baaqay cunaqabateyn
Warar 13 April 2021 19:27
Isutagga Bulshada Rayidka oo ka hor yimid muddo kordhinta
Warar 13 April 2021 17:32
Warar 13 April 2021 17:07